DAGAAL MAR KALE KU DHEX MARAY LABA BEELOOD DEEGAAMO KA TIRSAN GOBOL SANAAG IYO KHASAARE DHAAWAC IYO DHIMASHO ISKUGU JIRTA OO KA DHASHA | Maalmahanews
DAGAAL MAR KALE KU DHEX MARAY LABA BEELOOD DEEGAAMO KA TIRSAN GOBOL SANAAG IYO KHASAARE DHAAWAC IYO DHIMASHO ISKUGU JIRTA OO KA DHASHA
Maalimahanews:-Laba Beelood oo walaalo ah oo wada dega Deegaamo ka tirsan Gobolka Sanaag ee Somaliland ayaa shalay markale dagaal dhex maray,waxaana la soo sheegayaa inuu dagaalkaasi ka dhashay khasaare iskugu jira Dhimasho iyo Dhaawac iyadoo islamarkiiba ay Dawlada Somaliland ciidamo kala dhex dhigtay labadaasi beelood ee walaalaha ah.
Warar lagu kalsoon yahay oo Wargeyska Foore soo gaadhay Xalay oo arintaasi ku saabsan ayaa noo xaqiijiyay inuu dagaalkaasi labadaasi beelood ku dhex maray Deegaanka loo yaqaan Fadhi-Gaab oo masaafo ahaan u dhexaysa Degmooyinka Gar-Adag iyo Ceel Afweyn ee Gobolkaasi Sanaag balse maamul ahaan ka tirsan Degmada Gar-Adag. Deegaankan ayaa sida noo xaqiijiyay ka durugsan halkii ay dhawr bilood ka hor ku dagaalameen beelaha Walaalaha ah ee wada dega Deegaanka Ceel Afweyn,balse waxa ay ka kala dirsan yihiin uun beelahaasi hore ee halkaasi dirirtu ku dhex martay.
Majiraan Xogo lagu kalsoon yahay oo si faah faahsan uga hadlay Khasaaraha dhabta ah ee labadaasi Beelood ee Walaalaha ee dagaalamay kala gaadhay,balse Warar la hubo ayaa intaasi ku daray in Ugu yaraan ay ku naf waayeen dagaalkaasi dad gaadhaya 3-ruux oo dadkii dagaalamayay ka tirsan halka dhaawacana lagu sheegay inay kor u dhaafayaan illaa 10-Ruux, kuwaasi oo sida warkani nagu soo gaadhay ka wada tirsan Beelahaasi Walaalaha ah ee Dagaalku dhex maray. Sidoo kale lama oga sababta dhabta ah ee dagaalkaasi ka aloosmay.
Warar kale ayaa noo xaqiijiyay in Xalay illaa Shalay Galabtii halka dirirtu ka dhacday ay Xukuumadda Somaliland ku daad guraysay Ciidamo Xoogan si ay ukala bad baadiyaan Dadkaasi Walaalaha ah ee dagaalku ka dhex qarxay.